नेयमार बारे बोले मेस्सी, ‘रियल मड्रिड आए बार्सिलोनालाई घातक झट्का लाग्नेछ’ – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०२, २०७५१८:४८0
काठमाडौं, २ जेठ । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)का स्टार नेयमार स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडमा अनुबन्ध हुने समचार निरन्तर आइरहेका छन् । यही अवस्थामा बार्सिलोनाका सुपरस्टार तथा नेयमार पूर्व टिममेट लियोनल मेस्सीले मुख खोलेका छन् ।
बार्सिलोनाको चिरप्रतिद्वन्द्वी क्लब रियल मड्रिडमा नेयमार अनुबन्धित हुन भयानक हुने मेस्सीले बताएका छन् । मेस्सीले मंगलबार टिवाइसी स्पोर्टस्सँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘उनी रियलमा अनुबन्धित भए बार्सिलोनाका लागि घातक हुन सक्छ । रियल आउने कुरा उनको खुसी हो । तर उनले स्पेनबाट ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग जितिसकेका छन् ।’ यदी उनी रियल आए आफुहरुका लागि र बार्सिलोनाका समर्थकका लागि ठूलो झट्का हुने उनले बताएका छन् ।
फेब्रुअरीमा चोटग्रस्त बनेका नेयमार अहिले उचारका क्रममा छन् । उनी यही सिजनको सुरुवातमा बार्सिलोनाबाट विश्वकिर्तिमानी रकम १९८ मिलियन पाउण्डमा पिएसजी गएका थिए । फ्रान्समा एक सिजन विताएका उनी पछिल्लो समय स्पेन फर्कने मुडमा रहेको बताइन्छ । मेस्सीले नेयमार आफैंमा विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी भएको समेत बताएका छन् ।
म रोनाल्डोसँग प्रस्पिर्धा गर्दिनँ
उनले आफु कहिलै पनि क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएको बताएका छन् । ‘म रोनाल्डोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ । म सँधै घरेलु लिग र च्याम्पियन्स लिग जित्ने प्रयासमा हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘र म ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग एकसाथ जित्न चाहान्छु ।’
आफुले सँधै राम्रो गर्ने प्रयास गरेको र को उत्कृष्ट ? भन्ने विषय आफ्ना लागि महत्वपूर्ण नरहेको उनको भनाई छ । ‘म आफैलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छु । मैले क्लबबाट यो सिजन जति जितेको छु ती महत्वपूर्ण छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘म राष्ट्रिय टोलीबाट केही जित्न चाहान्छु । जुन अहिलेसम्म सकेको छैन ।’
चलचित्र लुटका निर्माता माधव वाग्ले नक्कली नोट सहित पक्राउ
नेयमार संसारकै मूल्यवान खेलाडी, एमबाप्पे दोस्रो र मेस्सी तेस्रो, को कहाँ ?
नेयमारलाई तीन खेलको प्रतिबन्ध